मात्र १५ दिनसम्म दहीमा मिसाएर खानुहोस् यी चिज, ह्वात्तै घट्ने छ तौल ! सबैले जानी राखौं – Annapurna Daily
मात्र १५ दिनसम्म दहीमा मिसाएर खानुहोस् यी चिज, ह्वात्तै घट्ने छ तौल ! सबैले जानी राखौं
On Jun 27, 2021 22,419
एजेन्सी । आजको यस्तो दौडधुपको जीवनमा, सबैजना फिट हुन चाहन्छन, तर अफसोस कि यो समय पाउँदैन। आजको समयमा, एक व्यक्ति पैसा कमाउनको लागि यति व्यस्त भएको छ कि उसले आफ्नो खाना र पेयबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिन असमर्थ हुन्छ । यस लापरवाहीका कारण, शरीरमा कुन रोगको घर बसेको हुन्छ मानिसलाइृ पत्तै हुँदैन। जब यसले एक गम्भीर रूप लिन्छ यस्तो अवस्थामा पनि बे भइरहेको छ भन्ने कतिलाई थाहा नै हुँदैन ।
आज हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो समस्याको बारेमा बताउन जाँदैछौं कि आधाभन्दा बढी मानिसहरू चिन्तित छन्। हो, हामी मोटाई, वजन बढ्ने र मोटाईको बारेमा कुरा गर्दै छौ करीव ८० मानिसहरूलाई मोटापालाई लिएर चिन्ता भइरहेको छ, यो सत्य हो । तौल प्राप्त गरेपछि, यो धेरै गाह्रो हुन्छ र जब तौल बढ्छ, शरीरमा सबै प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्छन् । शरीरको वजन बढाउनु पनि एक गाह्रो प्रक्रिया हो जस्तो कि वजन कम गर्न।
आजकल,मानिसहरुले तौल कम गर्न जिम जाने गर्दछन्। तिनीहरू सबै प्रकारका पेय पदार्थहरू पनि खान्छन् जुन तिनीहरूको शरीरको लागी हानिकारक प्रमाणित हुन्छ । तर यदि हामी सामान्य तरिकामा आहार परिवर्तन गरेर आफ्नो तौल कायम राख्दछौं भने हाम्रो शरीर को तौल घट्नेछ र स्वस्थ पनि हुनेछ । त्यसैले यो राम्रो छ कि तपाईं सामान्य तरिका अनुसरण गरेर आफ्नो तौल कम गर्नुहोस्।